China Knife Gate Valve Kugadzira uye Fekitori | Hongbang
1 MUVIRI GGG40 1
2 Chigaro EPDM / NBR 1
3 Suo SS304 / SS316 1
4 ANONYANYA SS304 / SS316 2
8 KINYA NUT NDEU
Range: kubva paDN 50 kusvika DN 600.
Rinoshanda ON / Off kana mutemo.
Wafer Threaded vanomhanyisa ISO PN10.
Unidirectional tightness, gwara chiratidzo nekuda kwemuseve uri pamuviri.
Nzvimbo diki yekuchengetedza: iro gedhi rinotungamirwa mumuviri uye rine kubvumidzwa kushoma.
Gland gungano: kurongedza uye O-mhete (zvakafanana zvinhu sechigaro chakabatana) kuvimbisa kusimba uye kudzikisira kwekushandisa torque. Kurasikirwa kwemusoro mudiki. Possibility kudzora gobvu mvura pamwe kwadzakabva diaphragm mhete.
Gadzira zvinoenderana nezvinodiwa nemutezo weEuropean
2014/68 / UE «Zvishandiso pasi pekumanikidzwa»: modulate H.
Pakukumbira: Chigadzirwa zvinoenderana neyambiro yekuEurope
"Zvinogona kuitika zvinoputika mumhepo" N ° 94/9 / EC: ATEX II 2 GD c uye ATEX II 3 GD c.
Maitiro ebvunzo akasimbiswa zvinoenderana nematanho EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 uye ISO 5208.
Saizi HA HB HC HC . C
Tinogona kusangana zvakasiyana siyana zvinodiwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Tinogamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vauye kuzobvunzana & kutaurirana nesu. Kugutsikana kwako ndiko kukurudzira kwedu! Ngatishandei pamwechete kuti tinyore yakajeka chitsauko!
Isu tave kutarisira kusangana kwakatowanda nevatengi vekunze kwenyika zvinoenderana nekubatsirana. Tichashanda nemoyo wese kuvandudza zvigadzirwa zvedu nemasevhisi. Isu tinovimbisawo kushanda pamwe chete nevatinoshanda navo bhizinesi kusimudzira kubatana kwedu kusvika padanho repamusoro uye nekugovana kubudirira pamwechete. Noushamwari kuti iwe ushanyire fekitori yedu nemwoyo wese.
Pashure: Stainless Simbi Imwechete Suo Check Valve
Zvadaro: F4 Gate Valve